Mgbochi ọrịa na-efe efe na-efe efe
site na nhazi na 20-04-02
Nkpuchi nchebe bụ otu n'ime isiokwu nchebe dị irè iji gbochie ọrịa na-efe efe, nke na-arụ ọrụ dị mkpa na njikwa na nchebe ọrịa. Ọ dị ezigbo mkpa iru ụkpụrụ nke ndị na-ebugharị ebido iji hụ na ahụike na nchekwa nke ndị mmadụ. Ozugbo enwere ...
Site na mmepe na-aga n'ihu na ọnọdụ ọrịa ntiwa, ojiji nke masks abawanyela nke ukwuu. Ọ bụla mejupụtara ọ bụla bụ ihe nchekwa nchekwa maka ndị mmadụ na ndị ọrụ ahụike. Ngalaba ruru eru na ụlọ ọrụ mmepụta ihe ndị metụtara ya na-alụ ọgụ megide oge. Dabere na ...